Akwụkwọ edemede Bill English na Martech Zone |
Edemede site na Bill English
Bill (@IGIHE) bụ imewe isi na Nkuzi ma na-eme ihe osise na kọmpụta kemgbe ụbọchị Amiga 500. Ntaneti na ihe nchọgharị weebụ nyere ya ohere ka ọ jikọta ọdịmma ndụ niile na eserese eserese na usoro nke usoro yana mmasị ya na teknụzụ na mmemme. Ihe omume ntụrụndụ Bill gụnyere Marvel comics, Guitar Hero, na ikiri pọdkastị banyere fim. Otutu n'ime usoro ihe eji eme ya bu ihe otutu nri Dike Coke. Ọ bi ugbu a na Westfield, IN, ya na nwunye ya dị ịtụnanya, Nicole, na nwa nwoke dịkwa ịtụnanya, Van.
Friday, February 19, 2010 Sunday, June 28, 2015 Bill English
Abilitygụ ihe bụ ikike mmadụ nwere ike ịgụ n’amaokwu ya ma ghọta ma cheta ihe ọ gụrụ. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji melite ọgụgụ, ngosi, na nkwupụta nke ederede gị na weebụ. 1. Dee maka Ọgụgụ Weebụ na weebụ adịghị mfe. Ndị na-ahụ maka kọmputa nwere obere mkpebi ngebichi, na ọkụ ha na-atụ na-eme ka anya anyị nwee ike ọgwụgwụ. Na mgbakwunye, ọtụtụ weebụsaịtị na ngwa ndị mmadụ wuru
Wenezdee, Jenụwarị 20, 2010 Thursday, May 14, 2015 Bill English
Ọ bụrụ na ị dee maka blog, jikwaa weebụsaịtị, ma ọ bụ tinye na ngwa mmekọrịta mmekọrịta dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter, foto nwere ike bụrụ akụkụ dị mkpa nke iyi ọdịnaya gị. Ihe nwere ike ịbụ na ịmaghị bụ na ọ nweghị ụdị edemede ma ọ bụ njiri ọhụụ ga-eme ka ị nweta foto dị mma. N'aka nke ọzọ, foto dị nkọ ma doo anya ga-eme ka ndị ọrụ dịkwuo mma? nghọta nke ọdịnaya gị ma melite ọdịdị na mmetụta nke gị